Cilmi-nafsiga qaababka qaabaynta garaafyada | Hal-abuurka khadka tooska ah
Cilmi-nafsiga qaababka qaabaynta garaafka
Iris Gamen | | Design Graphic
Dunida naqshadeynta waxaan ku kulmi karnaa indhaheenna hortooda qaabab iyo midabyo kala duwan, laakiin had iyo jeer ma naqaano macnaha mid kasta oo ka mid ah walxahan, maadaama ay ku xiran tahay sida loo dhigo ama loo qaabeeyo waxay bixin karaan hal macne ama mid kale. Marka aad ka soo baxdo albaabka gurigaaga, ma u istaagtay si aad naftaada u weydiiso waxa ay ka dhigan yihiin qaababkaas nagu wareegsan?
Dareenka kicinta ee aynu ku eegno dareenkeena inta aan noolnahay waxa ay leeyihiin astaamo ay wadaagaan waana taas ku dheggan maskaxdeena laguna xasuusto.
Sidaa darteed, su'aasha soo baxdaa waxay tahay ma arki karnaa dhammaan noocyada noocyada Ma jiraa cilmi-nafsiga foomamka? Hagaag, jawaabtu waa HAA si cad.
Sida aan ka faaloonnay, qaababka, oo ka mid ah kicinta aan ka hadlaynay, waxay saameyn gaar ah ku leeyihiin shakhsiyaadka. Sababtan awgeed, marka la samaynayo naqshad kasta, tani waa inay jirtaa. qaab cilmi-nafsiga.
Isku darka qaababka iyo walxaha kale ee muuqaalku waxay keenaan a curinta oo dareen la siiyo, fariinta loo gudbiyo dadweynaha waana shacabka oo marka la eego sida ay wax u arkaan, marka la isku daro natiijo togan ama taban ah.
Maqaalkan maanta waxaynu ku dhex qotomin doonaa cilmi-nafsiga foomamka adduunka naqshadeynta garaafyada oo qiyaas habka hal-abuurka ah si loo abuuro khibrad isticmaale oo togan.
1 Waa maxay cilmi-nafsiga foomamka?
2 Macnaha qaababka joomatari
2.4 Khadadka toosan
3 Macnaha qaababka kale: organic iyo abstract
4 Cilmi-nafsiga qaabka qaabka naqshadeynta
Waa maxay cilmi-nafsiga foomamka?
Marka naqshadeeyaha loo soo bandhigo fikradda mashruuca, waa inuu ku xisaabtamaa foomamka uu adeegsan doono, maadaama, sidaan sheegnay, mid kasta oo iyaga ka mid ah macno gaar ah ayaa ka dambeeya iyo saamayn ay ku abuurto qof kasta oo dadka ka mid ah.
Mid kasta oo ka mid ah foomamka aan ognahay maanta waxaa loo qoondeyn karaa koox macne ah, maadaama ay ka tagayaan raad toos ah maskaxdeena iyo hab dhaqankeena.
Waxaa tusaale inoogu filan marka uu inoo sheego in aynu sawirno cadceedda, inteena badan waxa aynu u matalnaa qaab wareeg ah oo hareeraheeda xarriiqyo toosan oo calaamad u ah fallaadhaha qorraxda. Maxaynu qaabkaas ula xidhiidhinnaa shaygaas?
Si aan su'aashan uga jawaabno waa cilmi-nafsiga qaab-dhismeedka, taas oo ah waxa noo sheegaya in foom kasta uu yahay waxay siinaysaa fikrad waana tan ku sii hadhi doonta maskaxdeena.
Wax badan ka dib sanado waxbarasho iyo cilmi baaris Xirfadlayaasha, macnaha ugu dambeyntii waxaa la siiyay waxa foom kasta na dareemo, maqaalkan waxaan ku tusi doonaa adiga.
Macnaha qaababka joomatari
Marka aan ka hadalno foomamka, dhowr fikradood ayaa maskaxda ku soo dhacaya, midda koowaadna waa tan qaababka joomatari, laakiin sidoo kale waa inaad ka fikirtaa qaababka organic iyo kuwa aan la taaban karin.
Marka hore waxaan ogaan doonaa macnaha qaababka joomatari. Waa kuwa ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca oo ay dhisaan qaababka caadiga ah oo ay fududahay in la xasuusto.
Laba geesoodka ama leydigu waa laba ka mid ah jaantusyada aynu sida ugu badan u ilaalino maalinteenna. Kaliya waa inaad hareerahaaga fiirisaa, gidaarada, telefishinka, albaabada, mobilada... Xagasha saxda ah iyo xadhkaha ay tirooyinkani ku dhisan yihiin ayaa gudbiya xasillooni, ragannimo, xoog iyo adkeysi.
Saddex-xagalku waxa uu u taagan yahay sawirka weyn firfircoon, waxay kicisaa xoog iyo firfircooni. Markaad la shaqaynayso saddex-xagalka waa inaad xisaabta ku dartaa shay aad muhiim u ah oo ah inaad go'aansato jihada aad u tilmaanto. Hadba meesha ay farta ku fiiqaan, waxay ina siinaysaa hal ama macno kale. Haddii aan dhigno saddex-xagalka meel toosan, ma keenayso dareen dheeli tiran, liddi ku ah, haddii aan dhigno rogaal celis, waxay nagu keentaa dareen khatar ah, taxadar leh.
Waa mid ka mid ah jaantusyada joomatari inta badan loo isticmaalo adduunka naqshadeynta, oo ay la socdaan kala duwanaanshaheeda sida oval iyo ellipse.
Goobaabintu waxay la xidhiidhaa daa'imnimada sababtoo ah, sida aynu horeba u ognahay, sawirkani ma laha bilow iyo dhammaad, iyo midnimo. Waxay gudbisaa shucuur dhow maadaama ay ka maqan tahay xaglo iyo meelaha ugu sarreeya, si ka duwan foomamka hore ee lagu sheegay. Maqnaanshahan aan ka hadlaynay wuxuu caawiyaa in la qabto oo si fudud loo xasuusto. Caadi ahaan waxay la xiriirtaa dareenka midnimada, qummanaanta iyo dhaqdhaqaaqa.
Haddii aan nidhaahno in goobadu ay ahayd mid ka mid ah jaantusyada joomatari ee ugu isticmaalka badan adduunka naqshadeynta, isticmaalka xariiqda tooska ah waa isla heer.
Iyada oo ku xidhan isticmaalka khadadka waxaan samayn karnaa hal fariin ama mid kale. Haddii aan helno xariiqyada u janjeera, waxay kiciyaan dareenka xawaaraha, dhaqdhaqaaqa. Dhanka kale, haddii aan ku aragno meel siman, waxay ku siin doonaan dareen degenaansho, kalsooni. Ugu dambeyntiina, haddii aan ku aragno meel toosan, waxay abuurtaa tamar, taas oo ka dhigi karta mid aad u muuqda, oo kicinaysa dheelitirka.
Sida caadiga ah si joogto ah looguma arko adduunka naqshadeynta, laakiin marka ay sameeyaan, waa inay matalaan dabeecadda. Waxay la xiriiraan kobaca nolosha iyo horumarka.
Iskutallaabtu waxay la mid tahay rajada iyo ilaahnimada. Waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu diro fariin mucaarad ama diidmo ah. Waxay soo jeedinayaan dareenka caafimaadka, cilaaqaadka, ruuxa, iyo rajooyinka.
Ma aha mid ka mid ah foomamka inta badan loo isticmaalo adduunka naqshadaynta, laakiin marka ay muuqdaan waxay ku daraan macne wada shaqayn, xikmad iyo garaad.
Macnaha qaababka kale: organic iyo abstract
Markaan ogaano oo aan kala saarno jaantusyada joomatari, waxaan dooneynaa inaan qeexno waxa ay yihiin tirooyinka dabiiciga ah iyo kuwa aan la taaban karin.
First of dhan Tirooyinka dabiiciga ah waa waxa aan u naqaanno qaababka dabiiciga ah. Kuwani waxay dhiiri galiyeen fanaaniinta kala duwan, sawir-qaadayaasha iyo naqshadeeyayaasha maanta. Waxay leedahay macne ah inay si cad u matasho shay oo ay ku bixiso cusub iyo midnimo.
Sida for qaababka aan la taaban karin waa calaamado ama qaabab ka tarjumaya fikradaha aan la taaban karin. Waxay gaari kartaa heer fikradda lagu matalo qaab aan la taaban karin oo aan la aqoonsanayn, markaa markaad la shaqeyneyso foomamkan, kaliya waxay matalaan waxa ugu muhiimsan.
Cilmi-nafsiga qaabka qaabka naqshadeynta
Sidaan qormada oo dhan ka faalloonnay cilmu-nafsiga qaabka qaab-dhismeedka garaafyada waa furaha maadaama kuwan (nashqadeenayaashoodu) ay yihiin xiriiriyayaal muuqaal ah. Waxay ku xiriiraan sawirka iyo halabuurka ay naqshadeynayaan, waa inay si cad u caddeeyaan qiyamka iyo dareenka ay rabaan inay gudbiyaan shaqadooda, maadaama ay jiraan arrimo badan oo saameyn ku yeelan kara aragtida shakhsiyaadka.
Astaantu waxay fure u tahay shirkad kasta, waa inay gaarsii oo gaarsii fariinta in shirkadani ay ka danbeyso. Taas awgeed, daraasadda iyo doorashada saxda ah ee foomamka naqshadeeda ayaa aad muhiim u ah.
Waxa kale oo aad u muhiim ah in la tixgeliyo cilmu-nafsiga ee habka adduunka ee suugaanta qoraalka. Sida aynu wada ogsoonahay, waxaa jira far qoraaleed aan la soo koobi karin oo loo kala saaray sida: serif, sans-serif, far far iyo qurxin.
Sida aan soo sheegnay foomamka ku xiran sida loo isticmaalo waxay leeyihiin hal macno ama mid kale, mar haddii wax la mid ah ay ku dhacaan qoraallada iyo si loo ogaado macnahaas waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado. falanqeeyaan qaababka jilayaalkooda, haddii ay leeyihiin qaabab joomatari badan ama qaabab badan oo organic ah, toosan ama qalloocan, iwm. Waxaa lama huraan ah in la tixgeliyo qaababka ugu badan ee qoraalka aan dooraneyno, markaa marka aan dooranno mid, waxaa faa'iido u leh fariinta iyo isgaarsiinta muuqaalka.
Isticmaalka cilmu-nafsiga qaabka qaabaynta garaafka waa qasab si aad u abuurto rafcaan, u fududayso, ha isticmaalin qaabab badan, ku ciyaar qaabab iyo macne laakiin had iyo jeer la xakameeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Cilmi-nafsiga qaababka qaabaynta garaafka
Sida loo soo dejiyo fiidiyowyada Tik Tok bilaa Watermark